#ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဌာန်းကို ဘာကြောင့် ပထမဆုံး နေ့မှာပွားများ ခိုင်းရပါ သန ည်း❓ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
မနီပွန်ရေ မင်္ဂလာပါရှင့် အရင်ကဗုဒ္ဓာနုဿတိပွါးရင် မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီး ပူဇော် အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖြစ် ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရား ဖြစ် ဖြစ် အာရုံ ပြုပါ တယ် အမ ဗုဒ္ဓဂါယာ ဖွာ ပွင့် ဟော စံ ဖူးတဲ့ ရက်မှာ မြတ်စွာ ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာစံဝင်တော့ခြေတော်အစုံကို နှဖူးနဲ့ ဦးတိုက်ဖူးခဲ့ရတာက တကယ် အပြင်မှာ ဖူးရ သလိုမျိုး feeling ရခဲ့တော့ အခုက အရဟံ လို့စိတ်ထဲက ဆိုလိုက်တာနဲ့ အဲ့ ခံစား မှုလေးနဲ့ စိတ်ထဲကြည် နူးနေ တာ ခါတိုင်း လို ကိလေသာ ကင်းစင် တော်မူ သော မြတ်စွာဘုရား ဆိုတာ စိတ်ထဲ က မဆို ဖြစ်တော့ရင်ရောရပါလားအမ ဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေ နဲ့ အတူ အခြားသော မေးခွန်းလေး တွေကိုပါ တပေါင်းတည်း ဖြေပေးလိုက်ရပါတယ် ရှင့်..ပထမဦးစွာ #မေးခွန်းမေးတဲ့ယောဂီလေး ကိုအထူးလေးစား၍ #ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေရှင့်.. အဲ့ဒီ လို feeling မျိုး လို ချင်လို့ ကို ဒီလို အာရုံပြုမှုမျိုး ကို ရစေ ချင်လွန်းလို့ ဘုရားဖူးခန်းကို ထဲ့ပေးထါးရတာပါ sisရေ.. သိပ်ကို ကောင်းတာ ပေါ့ရှင့် အဲ့လို ပွား များပါ ရှင့်.ခုမှ သက်ရှိ ဘုရားကို တကယ် ပူဇော် ရပါပြီ တကယ်လည်း ပီတိ အပြည့်နဲ့ ပူဇော်ရပါပြီ..သာဓု သာဓုသာဓုပါ တချို့များ ပွားရင်း ပွားရင်းနဲ့ ပီတိပဿတိ တွေဖြစ်လာတာ ..ပါ…ဘယ် အာရုံ ဖြစ်ဖြစ် ပီတိ ဖြစ်အောင်ပွားများယူရ ပါတယ်..ဒီလို အာရုံမျိုး ယူလို့ရတဲ့သူက ခုလို ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ပွားတဲ့အချိန်ကို သက်ရှိဘုရားလို့ ရည် မှတ်ပြီး ပူဇော်လို့ရပါပြီ..မြေဇင်းနည်းစနစ်ရဲ့ အားသာချက်လေးတွေကို ဒီနေရာလေးမှာ ရေးပေး ပါမယ် ရှင့်..။
#ဗုဒ္ဓါနုဿတိကို ဘာကြောင့် ပထမဆုံး နေ့မှာပွားများခိုင်းရပါသနည်း ပထမ ဦးစွာ သင်ခန်းစာ စတင်တဲ့နေ့မှာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိကို ဘာကြောင့်ပွားခိုင်းရတာလည်းဆိုရင်..သဒ္ဓါ တက်စေဖို့ နဲ့ သမာဓိ အားကောင်း စေဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်နဲ့ ပွားခိုင်းရတာပါ..စစချင်း ပွားတဲ့နေ့မှာ ပွားပုံလေးက… တရားထိုင်သလို ထိုင်ပါမယ်.. ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရား ပုံတော် တဆူဆူရဲ့ ပုံကို မိမိရဲ့ မျက်စိထဲမှာ စွဲသွားအောင် ကြည့်ပြီး..ရင်ခေါင်းထဲကနေ..လာတဲ့ အသံထွက်ကို စိတ်နဲ့ အရဟံ…အရဟံ ဆိုပြီး .. စိတ်ထဲ ကနေ ရွတ်ပြီး..ခုဏ မျက်စိထဲမှာ မြင်ထား ကြည့် ထား တဲ့ ပုံတော် ကို အာရုံပြု ထားရ ပါတယ်… ပြုထားရတဲ့အခါ မိမိ စိတ်ကလေးကို မိမိ၏ အရှေ့တည့်တည့် ၁တောင်အကွာအ ဝေး မှာ ရှိနေ တယ်လို့ ခံစားပြီး ပွားများရ ပါတယ်..အဲ့ဒလို ဘာလို့ ၁တောင် အကွာလို့ ပြောရ တာလဲ ဆိုရင် စိတ်နဲ့ မျက်စိထဲ ကို ကပ်ပြီး အားစိုက် ရှုမိရင် မူးလာ တာတို့ မျက်ရိုး နာ တာ တို့ စသ ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် မှာ အမူအရာ တခုခု ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှု အပေါ် ကို စိတ်မရောက်သွားစေ ချင်လို့ပါ ..အဲ့ဒလိုစိတ်က ဟိုရောက် ဒီရောက်ဖြစ်သွားရင် သမာဓိ ဖြစ်ဖို့ အားကိုလျော့ကျသွားစေပါတယ် …ဒါမို့ အဲ့လို ပွားခိုင်းရတာပါ..ပုံကို ပေါ်အောင် ဖော်နေရတာမို့ စိတ်က ပုံဖော် တဲ့အပေါ်ရယ် အရ ဟံလို့ ရွတ်နေရတဲ့ ဂုဏ်တော် ရဲ့ အပေါ်မှာသာ စိတ်ကလေးက ရှိနေတာမို့ အပြင်က အတွေးတွေ ပေါ် ခွင့် ရ ဖို့ ခက်ခဲ သွား ပါ တယ်….။.အ တွေး ပေါ် လာ ခဲ့ ရင် လည်း ပုံ တော် ကို ပဲ ပြန် အာ ရုံ စိုက်ရ ပါတယ်..။
ပုံတော် ကို ပုံဖော်ပြီး ဂုဏ်တော်ကို စိတ်စိုက်ပြီး ရွတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့ စိတ်ကလေးဟာ..(၂ )နေ ရာမှာ ရှိနေ ပါတယ် ၁)#ဘုရားပုံတော်ပေါ်၂) #ဂုဏ်တော်ရွတ်နေတဲ့စိတ်ပေါ် နောက် တခုက တော့..အဲ့ဒလို ပွား များနေတဲ့အချိန်မှာ ပုံပေါ် လာတာဟာ #မျက်စိထဲမှာလား? #စိတ်ထဲမှာလား? သိစေချင်လို့ပါ..ရှေ့တဲ့တဲ့ ၁တောင်အကွာမှာ လို့ ပြောလိုက် ထဲက မျက်စိ နဲ့ မြင်နေရတာ မဟုတ် လို့ ၁တောင် ဆိုတဲ့ အကွာအဝေးကို မိမိစိတ်ကနေ ပဲမှန်းဆရတာပါ… စိတ် နဲ့ပဲ သိရတာပါ ..အရ ဟံ ဂုဏ်တော် ကို ပွားခိုင်း တဲ့ နေ့မှာပင် မိမိ တို့၏ စိတ်ကလေး ကို အကဲ ခတ်မိ စေချင် လို့ပါ။
#စိတ်ဟာ အရာအားလုံးကို ဦးဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ပါ..မျက်စိ ကို မှိတ်ထား ရင် တောင် စိတ်က အာရုံ ပြုမှသာ အရာ အားလုံး ကို မြင်ရ တာပါ.. ဆိုတာ ကို သိစေချင် လို့ပါ…ထို့ ပြင် ဘုရားရဲ့ ပုံတော်ကို ဂုဏ်တော် ရောက်အောင်သွင်း တဲ့ #စိတ်ကလေးညွှတ်တက်စေချင်လို့ပါ .ဘုရားပုံ လည်းပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက် နဲ့ မတည်မြဲ နေတဲ့ မိမိရဲ့စိတ်အ​ခြေအနေ ကို ပါ တခါထဲ အကဲ ခတ်မိသွား စေချင်လို့ပါ..သမာဓိ အားကောင်း လာတာနဲ့ အဲ့ဒလို ပွားရင်းပွားရင်းနဲ့ စိတ်ကလေး က သက်ရှိ ဘုရား ကို ပူဇော် နေရ တယ် လို့ ခံစား မိလာ စေချင် လို့ ပါ. ဘုရားဂုဏ် တော်တွေ ကိုသာ ရွတ်နေတယ် စိတ်က လေးက သက်ရှိ ဘုရားလို့ မမြင် မထင် ထားတော့ ဂုဏ် တော် ရွတ်သလောက် အကျိုး သိပ်မ များ လှ ခြင်း များ ကို ဤနည်းဖြင့် ပွားများလိုက်ခြင်းသည် ပို၍ ထိ ရောက် မှုရှိ လို့ ပါ တချို့ ဆရာတော် ဘုရားကြီး များက တော့ က သိုင်းကို ခိုင်အောင် ပြု လုပ် ပြီးမှ သာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကို ခုလို မျိုး ပွားများ စေပါတယ်…ဒီမှာက ကျတော့… စတဲ့ နေ့ကနေ စလို့ နေ့စဥ် နဲနဲ ချင်းစီ ပွားများ စေခြင်း ဖြင့် အကျင့် ဖြစ်အောင် ဆွဲခေါ် ယူ သွား ပါတယ်..ဘုရား ဖူးခန်း နေ့မှာတော့.. ဘုရားတွေ ကို ဖူးခိုင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပါလာ ပါတယ်.. ယခုလို ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကို ဒီလိုနည်းစနစ်နဲ့ ပွားများ လာခဲ့ရတာမို့..ကျင့်သားရပြီး.. ဘုရားတွေကို ဖူးခိုင်းတဲ့ အခါမှာ စိတ် ကို ညွှတ်တက်ပြီးသားဖြစ်နေရတာပါ..။
ဒီတော့ ဘုရားဖူးခန်းမှာ ဖွား၊ ပွင့် ၊ ဟော ၊စံ၊ သင်ခန်းစာ ပါနေတာကြောင့် တချို့သမာဓိ သိပ်အား ကောင်းတဲ့ ယောဂီများက သက်ရှိဘုရားကို တွေ့မြင် ဖူးမြင် ခဲ့ရရော..ဟော…အထက်က ယောဂီ မေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ် လာရပါတယ်..အဲ့ဒီတော့..ဘယ်လောက် အကျိုးများလိုက်သလဲ …ပွား နေစဥ် အခါ မှာလည်း အတွေး မဝင်လို့… ကိလေသာ ဖြစ်ခွင့်မရ..ကိလေသာက အမှောင်.. ဟော အမှောင် မလာတော့ အလင်းက လာတာပေါ့ အလင်းဆိုတာ ကုသိုလ်ဓာတ် ကုသိုလ်ဓာတ် တွေ မိမိစိတ်မှာ ကိန်းကိန်း လာတာပေါ့..ပွားရင်းပွားရင်းနဲ့ ဘုရားကို တကယ် ကြည်ညို တဲ့ သဒ္ဓါ တရားတွေက ယိုဖိတ်လာပါလေရော…ဒီနေရာမှာ ပဲ တချို့ ယောဂီ များက ပါရမီ ဓာတ်ခံ ရင့်သန် သူများ ကျတော့ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ ပီတိပဿတိ တွေကို ဝိပဿနာ ရှုပွားလည်း ရှုပွား လိုက်ရော… ဟော… တရားတွေ… ရသွားကြရတာပေါ့..ဝိပဿနာ မရှုပွားတက်သေးတဲ့ ယောဂီများကျ တော့ လည်း..သဒ္ဓါ တရား ထက်ထက် သမာဓိ အား ကောင်းကောင်း တွေနဲ့ နောက်နေ့ သင်ခန်းစာ တွေ ကို ရှုမှတ် ပွားများ သွားရင်း သွားရင်းနဲ့ လိုရာခရီး တွေ ရောက်ကြရတာပေါ့…ဒလောက် ကောင်း လွန်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကို ပွားများ ခိုင်းရ ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ် ချက်တွေ ကို….သိရှိ ထားမယ် ဆိုရင် ဖြင့်..ဘယ်လောက်တောင် တန်ဖိုးရှိလိုက်ပါသလဲ..ဟော တရားစခန်းပြီးတော့ရော.. ဗုဒ္ဓါနုဿတိ က မပွားရတော့ဘူးလား.. ။
ဘယ်ဟုတ် လိမ့်မလဲ..ဝိပဿနာ မရှုပွား နိုင် သေးရင် မရှုပွား တက်သေးရင် နေစဥ် အခါ တွေမှာ ခုလို ဗုဒ္ဓါနုဿတိ လေးနဲ့ နေတဲ့ အကျင့်ကို ရ ရှိသွား ပြီလေ..ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိုက် သလဲနော်…သဒ္ဓါ လည်း တက် သမာဓိ လည်းဖြစ် ဆိုတော့…ကုသိုလ် တွေ မှ ရေတွက် မရ တော့ လေပြီ…မျက်တောင် တခက်မှာ ကုသိုလ် စိတ်ပေါင်း ကုဋေနဲ့ ချီ ပြီး ရနေ တာလေ..နဲတဲ့ ကုသိုလ် တွေမှ မဟုတ်တာ…ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ရဲ့ အကျိုး တရားတွေ ကလည်း ရေး၍ ကုန်နိုင် ဖွယ်မရှိ ပါပြီ..ဒါ ကြောင့် ဝါယူ ဝါမှတ် မလုပ်ခင် ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ် လောက် ပွားခိုင်း ခြင်း ဟာ….ခုလို မျိုး အ ကျင့် ပါသွား ရအောင်ပါ.နောက်တခါ.. စိတ်တွေ ပြန့်လွင့်လို့ ဘာ အာရုံကိုမှ စိုက်လို့မရဘူး ဆိုတာတွေ အတွက်ပါ.. ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကိုပဲ ပွားနေ ခိုင်းရ တာပါ..ဘယ်ထိ ပွားများ ရမလဲ..ဘုရား ကို ဘယ်နေ့ မေ့သွားမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်မေးရမလိုပါပဲ..ဖဘုရားရှင် ကြီးကို မသေမချင်း သတိရနေ မှာပါ…သက်ရှိဘုရားကို တကြိမ် လောက်ဖူးတွေ့ခွင့် ရသွားရင်လည်း ဘယ်တော့မှ မေ့လို့ကို မရ တော့တာပါ…အကယ်၍ သက်ရှိ ဘုရာကို ဖူးမရ သေးဘူး ဆိုရင်လည်း…စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ ဘူး…အရာအားလုံး က ကျင့်ရင် အကုန်ရပါတယ်..ကျင့်နေဖို့ပဲ လိုပါတယ်..ကျင့်ဖို့အတွက် တော့. .သတိ လိုပါတယ်..ကျင့်ဖို့ မေ့နေရင်တော့ အကျင့်ပါလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။
ဒါမို့ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကို ပွားနေ တာဟာ ကျင့်နေတာ ပါ…အချိန်တိုင်း ပွားနေ ရမှာ ပါ…ထိုင်စဥ် အခါ စူးစူး စိုက်စိုက် ပွားပြီး အခြား အချိန်တွေ ကိုတော့ သတိ ရသလောက် ပွားနေ ရပါမယ်…စိတ်က ဘုရားဆီကို အမြဲ ပို့ လွှတ် ထားရ ပါမယ်….မြတ်စွာ ဘုရားရှင်ကြီး လောက် အေးချမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် လောကကြီး၌ ရှိနိုင် ပါဦး မည်လော….. ကိလေသာတွေ ကုန်စင်နေတဲ့ အရဟံ ဂုဏ်တော်ကြီးနဲ့ ပြည့်စုံ နေတဲ့ မြတ်ဘုရားရှင် ကြီး…ကို ပူဇော် နေရတဲ့.. စိတ် မှာဘယ် လောက်များ ကုသိုလ်တွေ ရနေမလဲ….. ထို့ကြောင့် ဤ မြေဇင်း နည်းစနစ်၏ အားသာ ချက် တခု ထဲ မှာလည်း ဤ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကို ပွားများ နည်း အသေး စိတ်အား ခုလို သင်ပေး ခြင်းဟာ တခုအ ပါအဝင် ဖြစ်နေ ပါတော့တယ် ရှင်…။
ဒီလောက် အဖိုး မဖြတ် နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ပွားများခြင်းကို စာရေးသူ ကတော့ဖြင့် သက်ရှိဘုရား ကို အဲ့ဒီလို ပူဇော်ခြင်း မျိုးနဲ့နေစဥ် အချိန်တိုင်း မှာ ပွားများပူဇော် နေပါတယ်.. ဤသို့ သင် ကြားပေးလိုက်သော ဆရာတော် ဘုရားကြီးများနှင့်တကွ..ဤနည်းစနစ်ကြီးကို အဆင့်ဆင့်လက် ဆင့်ကမ်း ထိမ်းသိမ်း ခဲ့ကြသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် များကို အကြိမ်ကြိမ် ဦးခိုက် ပူဇော် လိုက်ရပါသည်။ ဤသည်ကား ဘာကြောင့် ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကို စနစ်တကျ ပွားများခိုင်း ရပါသနည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ပေတည်း…။ယောဂီ အားလုံးတရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်